I-Desogestrel Powder Ukuthengiswa (54024-22-5): Ukuphonononga kunye nesistim kunye nemiphumo | AASraw
Ubuninzi beDoogestrel Ukuthengiswa: IziPhononongo kunye neNqanaba kunye nemiphumo
/Blog/Desogestrel/Ubuninzi beDoogestrel Ukuthengiswa: IziPhononongo kunye neNqanaba kunye nemiphumo
ezaposwa ngomhla 06 / 28 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Desogestrel.
Yonke into malunga nePoogestrel Powder
1.Desogestrel 54024-22-5 Uqwalaselo
Ukuhlolwa kwePowder Powder 2.Desogestrel
3. Inkqubo ye-Action-Desogestrel Powder
4.Usebenzisa njani i-Desogestrel Powder?
5. Isisombululo sePoogestrel Powder
6.Bani abangasebenzisa i-Desogestrel powder?
7. Iingenelelo kunye nokungonakali-I-Desogestrel Powder
8.Desogestrel Powder Effects Effects
I-9.Desogestrel Powder Effects ngoxa ukuxiliswa
I-10.Desogestrel Powder Ukuthengiswa
Desogestrel powder ividiyo
IDesogestrel powderbasic Iimpawu:
igama: Desogestrel powder
I-molecular Formula: C22H30O
Isisindo somzimba: 310.47
1. Desogestrel 54024-22-5 Uqwalaselo
Desogestrel kunye nentsebenziswano ye-ethinyl estradiol isetyenziselwa ukuthintela ukukhulelwa. Iipilisi zokulawula ukuzalwa eziqulethe ezimbini iintlobo zamahomoni, i-desogestrel kunye ne-ethinyl estradiol, kwaye xa ithathwa ngokufanelekileyo, ikhusela ukukhulelwa. Isebenza ngokumisa iqanda lomfazi ekuphuhliseni ngokupheleleyo inyanga nganye. Iqanda alikwazi ukusamkela isityalo kunye nokuqumba (ukukhulelwa) kuthintela.
Akukho ndlela yokukhusela i-100 yeepesenti esebenzayo. Izindlela zokulawula ukuzalwa njengokuba utyando lokuba ngumntu oyinyumba okanye ukungaboni ngesondo kusebenza ngakumbi kuneepilisi zokulawula ukuzalwa. Xoxa ngeendlela ozikhethayo zolawulo lokuzalwa kunye nogqirha wakho.
Eli liyeza alinakuthintela usuleleko lwe-HIV okanye ezinye izifo ezithathelwana ngesondo. Ayinakunceda njengendlela yokukhulelwa kwangokukhawuleza, njengokuba emva kokuxhatshazwa ngokwesondo olungakhuselekanga. Le nyeza ifumaneka kuphela nomyalelo wonyango wakho.
2. Uhlolo lwePoogestrel Powder Review
Igama lemveliso Desogestrel powder
Inani leCAS 54024-22-5
I-Molecular Formula C22H30O
Isisindo somzimba 310.47
ukugcinwa Temp -20 ° C Ifreezer
3. Indlela Of Action-Powder
Ukubopha kwi-progesterone kunye ne-estrogen receptors. Iiseli ezijoliswe kuqukwa ziquka umzila wesibalo sokuzala, intlanzi ye-mammary, hypothalamus, kunye ne-pituitary. Emva kokubopha kwi-receptor, i-progestin efana ne-desogestrel iya kunciphisa i-freogon (release) ye-gonadotropin ekhupha i-hormone (GnRH) ukusuka kwi-hypothalamus kwaye ixhamle i-HH yokuqala (i-hormone ye-luteinizing).
I-Desogestrel isetyenziswe njengento yokukhulelwa kwabafazi. I-Desogestrel yindlela ye-progestin okanye uhlobo olwenziweyo lwe-hormone yesini, i-progesterone. Kwimijikelezo yesiqhelo yomfazi, iqanda likhula kwaye likhutshwa kwii-ovaries (ovulation). I-ovary ize ivelise i-progesterone, ikhusele ukukhululwa kwamaqanda angaphezulu kwaye ibambe iqhekeza kwisibeleko ukuze ukhulelwe. Ukuba ukukhulelwa kwenzeka, amanqanaba e-progesterone emzimbeni ahlala ephakamileyo, ukugcina isibeleko sibhinqa. Ukuba ukukhulelwa akukwenzeka, amazinga e-progesterone emzimbeni awela, oku kuphumela ekuhambeni kwexesha. I-Desogestrel iqhinga elilawulayo umzimba ekucingeni ukuba i-ovulation sele ivele, ngokugcina amanqanaba aphakamileyo eprogesterone. Oku kuvimbela ukukhutshwa kwamaqanda kuma-ovari.
4. Indlela yokusebenzisa i-Desogestrel Powder?
Kubalulekile ukuba usebenzise le mayeza ngokuchanekileyo njengoko ugqirha ugqirha wakho. Ungayisebenzisi ngaphezulu, ungayisebenzisi rhoqo, kwaye ungayisebenzisi ixesha elide kunokuba ugqirha wakho wayala.
Ukusebenzisa i-contraceptive ngomlomo njengokhuselekile kwaye unokwethenjelwa ngokusemandleni, kufuneka uqonde ukuba njani kwaye uza kuthatha nini kwaye ziphi na iziphumo ezinokulindelwa.
Eli liyeza liza nemiyalelo yesigulane. Funda kwaye ulandele le miyalelo ngokucophelela. Buza ugqirha wakho okanye ukhemisti ukuba unemibuzo.
Eli liyeza lifumaneka kwiipakethe ze-blister kunye nomthengisi weethebhulethi. Iipakethe nganye ze-blister iqukethe iipilisi ze-28 ezinemibala eyahlukeneyo efuna ukuba ithathwe kwimiyalelo efanayo njengoko iqondiswe kwi-pack blister.
Xa uqala ukusebenzisa eli liyeza, umzimba wakho uya kufuna ubuncinane iintsuku ze-7 ukulungelelanisa ngaphambi kokuba ukhulelwe. Sebenzisa ifom ye sibini yokukhulelwa (umzekelo, ikhondom, i-spermicide, okanye i-diaphragm) kwiintsuku zokuqala ze-7 zomjikelezo wakho wokuqala weepilisi.
Thatha i-Desogestrel Ubunzima ngexesha elinye ngosuku. Iipilisi zokulawula ukuzalwa zisebenza kakuhle xa kungekho iiyure ezingama-24 ezidlula phakathi kwamaxabiso.
Musa ukunqumla okanye ukulibazisa ukuthatha ipilisi yakho ngaphezu kweeyure ze-24. Ukuba ulahlekelwa umthamo, ungakhulelwa. Buza udokotela wakho iindlela zokukunceda ukhumbule ukuthatha iipilisi okanye malunga nokusebenzisa enye indlela yokulawula ukuzalwa.
Unokuziva ugule okanye ugxeka, ikakhulukazi kwiinyanga ezimbalwa zokuqala othabatha eli liyeza. Ukuba isicathulo sakho siqhubeka kwaye singasuki, biza ugqirha wakho.
Landela imiyalelo kwiphepha lesigulane okanye ubizele ugqirha wakho ukuba uhlanza okanye unesifo sohudo ngaphakathi kwe-3 kwiiyure ze-4 zokuthatha eli liyeza. Phatha oku njengeli dose ephosakeleyo.
Ungadli i-grapefruit okanye uphuze ijusi yamagilebhisi ngelixa usebenzisa le mayeza. I-grapefruit kunye nejusi yamagilebhisi kunokutshintsha inani leliyeza elithathwa emzimbeni.
Ugqirha wakho unokucela ukuba uqale umthamo wakho ngosuku lokuqala lwenyanga yakho (ekuthiwa yi-Day 1 ekuqaleni) okanye ngeCawa yokuqala emva kokuqalisa kokuya esikhathini ( NgeCawa kuqala). Xa uqala ngosuku oluthile kubalulekile ukuba ulandele ishedyuli, nokuba uyaphuthelwa idosi. Musa ukutshintsha ishedyuli yakho ngokwakho. Ukuba ishedyuli oyisebenzisayo ayilungelekanga, thetha nodokotela wakho ngokutshintsha. Ukuqala ngeCawa, kufuneka usebenzise enye indlela yokulawula ukuzalwa (umz., Ikhondom, isithintelo, isifo se-spermicide) kwiintsuku zokuqala ze-7.
Ufanele uqale lwakho olulandelayo kunye nayo yonke imihla ye-28 yonyango ngosuku olufanayo lweveki njengoko irejimen yokuqala iqalile kwaye ilandele ishedyuli efanayo.
♦ Ukukhulelwa (ukukhusela ukukhulelwa):
· Abantu abadala kunye nentsha-Ithebhulethi enye ye-orange (esebenzayo) ethathwa ngexesha elifanayo imihla ngemihla ye-21 elandelelanayo ilandelwe enye ipilisi eluhlaza (inert) imihla ngemihla kwiintsuku ze-7 ngomjikelezo wesisindo.
Ukusetyenziswa kwabantwana kunye neDose kufuneka kugqitywe ngugqirha wakho.
Shayela ugqirha wakho okanye ummeseli ukuze ufumane imiyalelo. Leli gama linemiyalelo ethile yesigulane kwinto oyenzayo xa ulahlekelwa idosi. Funda kwaye ulandele le miyalelo ngokucokisekileyo kwaye ubize ugqirha wakho ukuba unemibuzo.
Sebenzisa ifom yesibili yokulawulwa kokuzalwa kwiintsuku ze-7 emva kokuba ulahlekelwe umthamo ukukhusela ukukhulelwa.
Qinisekisa ukuba ugqirha uyazi ukuba ulahlekelwa ixesha lakho kwiinyanga ze-2 ngokulandelana, kuba oku kuthetha ukuba ukhulelwe. Awunakho ixesha kuloo nyanga ukuba ulahlekelwa ngaphezu kweyodwa dose okanye utshintshe isimiso sakho.
Unokuba negazi lokuphuma okanye ukuphawula xa ungathathi i pilisi ngexesha. Iipilisi ezininzi oziphosakeleyo, mhlawumbi uya kuba negazi.
♣ Ukuba uphoswa ipilisi elula ye-orange: Thatha i pilisi ngokukhawuleza kwaye uthathe ipilisi elandelayo kwishedyuli yakho rhoqo.
♣ Ukuba uphoswa ezimbini iipilisi ze-orange ngeveki 1 okanye i-2: Thatha iipilisi ezimbini ngokukhawuleza kwaye ezimbini zilandelayo zipilisi ngosuku olulandelayo. Qhubeka uthatha ipilisi enye ngosuku uze uqede ipakethe. Sebenzisa ifom ye sibini yokulawulwa kokuzalwa (umzekelo, ikhondom, imithi yesibindi) kwiintsuku ze-7 emva kokulahlekelwa idosi.
♣ Ukuba uphoswa iipilisi ezimbini ze-orange ngeveki 3, okanye ukuba ulahlekelwa iipilisi ze-orange ezilula okanye ngaphezulu kwiveki nganye:
♦ Usuku lwe-1 luqala: Phonsa ngaphandle kwepakethi uze uqale ipakethi entsha ngaloo mini.
♦ Iveki iqale: Qhubeka uthatha ipilisi enye ngosuku ukuya kwiCawa, uze uphonsa yonke ipakethe uze uqale ipakethi entsha ngaloo mini. Sebenzisa ifom ye sibini yokulawula ukuzalwa (umzekelo, ikhondom, i-spermicide) kwiintsuku ze-7 emva kokuba uphoswe umthamo, ukukhusela ukukhulelwa. Ukuba ulahlekelwa ixesha lokuya esikhathini kwiinyanga ze-2 ngokulandelelana, jonga ugqirha wakho kuba unokukhulelwa.
♣ Ukuba uphoswa naziphi na iipilisi eziluhlaza ezisixhenxe ngeveki 4: Phonsa iipilisi ozilahlekileyo. Qhubeka uthatha ipilisi enye ngosuku uze uqede ipakethe.
6. Ngubani ongasebenzisa iDesogestrel powder?
Uninzi lwabasetyhini lunokusebenzisa i-powder deogestrel, kodwa unganakho ukuba:
♦ cinga ukuba unokukhulelwa
♦ ungafuni ukuba amaxesha akho atshintshe
♦ thabathe amanye amayeza anokuchaphazela i pilisi
♦ ube negazi elingachaziyo phakathi kwexesha okanye emva kwesondo
♦ ziye zavelisa izifo zesifo okanye isifo senhliziyo okanye sine-stroke
♦ unesifo sesibindi
♦ unomdlavuza wesifuba okanye unayo ngaphambili
♦ ube ne-cirrhosis ezinzulu okanye izibilini zesibindi
♦ Ukuba unempilweni kwaye akukho zizathu zonyango ukuba kutheni ungafanele uthathe i-deogestrel powder, ungayithatha de kube yimizuzu yokugqibela okanye uze ube ngu-55.
Ipowder ye-desogestrel ikhuselekile ukusebenzisa xa uncelisa. Inani elincinci le-desogestrel lingadlula ubisi lwakho lobisi, kodwa oku akuyingozi kumntwana wakho. Akuchaphazeli indlela ubisi lwakho lobisi oluveliswa ngayo.
Nangona kungenakwenzeka, kunethuba elincinci kakhulu lokuba unokukhulelwa ngelixa uthabatha ipowder deogestrel.
Ukuba oko kwenzeka, akukho bungqina bokuba ipilisi inokulimaza umntwana wakho ongakazalwa. Ukuba ucinga ukuba unokukhulelwa, khuluma ne-GP yakho okanye u tyelele ikliniki yakho yokuzala.
Fumana iingcebiso zezokwelapha xa unesihlungu okanye ngokungaqhelekanga kwisisu sakho, okanye ukuba ixesha lakho lifutshane okanye lilula ngaphezu kwexesha eliqhelekileyo. Kungenzeka ukuba ezi ziimpawu zokulumkisa zokukhulelwa kwe-ectopic, nangona oku kunqabile.
akuphazamisi ubulili unganakho ixesha eliqhelekileyo ngelixa uyithatha - amaxesha akho angabhanya, rhoqo, okanye angayeka ngokupheleleyo, kwaye unokufumana indawo phakathi kwamaxesha
ungayisebenzisa xa uncelisa ayikukhusela kwi-STIs
kuyincedo ukuba awukwazi ukuthatha i-hormone estrogen, esepileni edibeneyo, iqhosha lokukhusela kunye nesondo lesisu kufuneka ukhumbule ukuyithatha okanye ujikeleze ngexesha elifanayo yonke imihla
ungayisebenzisa nayiphi na iminyaka - nokuba utshaya kwaye uphaya kwe35 amanye amayeza, kuquka okunye (okuqhelekileyo) antibiotics, unokuyenza ibe yincinci
8. Iimpembelelo zeeDoogestrel zePowder Effects Side
Fumana uncedo lwezonyango loxakeka xa unemiqondiso yokumelana nomonakalo: imihlathi; ukuphefumula okunzima; ukuvuvukala kobuso bakho, imilomo, ulwimi, okanye umqala.
Yeka ukusebenzisa iipilisi zolawulo lokuzalwa waza ubize ugqirha wakho kanye xa unayo:
♦ izibonakaliso zentsholongwane-ngokuphazamiseka okanye ukubuthathaka (ngokukodwa kwelinye icala lomzimba), intloko ekhwabanisa, intetho ekhutshulwayo, iingxaki zombono okanye ukulinganisela;
♦ izibonakaliso zecala legazi kwiintlungu zesifuba-sifuba, ukukhwehlela ngokukhawuleza, ukuqhuma, ukuphefumula ngokukhawuleza, ukukhwehlela igazi;
♦ iimpawu zelaphu yegazi kwintlungu yakho, ukuvuvukala, ukufudumala, okanye ubomvu kwelinye okanye emilenzeni yomibini;
♦ iimpawu zeentliziyo-intlungu yesifuba okanye uxinzelelo, intlungu esasazeka emlonyeni wakho okanye emagxeni, isisongela, isithukuthezi;
♦ iingxaki zesibindi-ubuhlungu besisu, isifo, ukukhathazeka, ukuphelelwa kwesidlo, umchamo omnyama, izitshixo zobumba, i-jaundice (ukuphuzila kwesikhumba okanye amehlo);
♦ utshintsho kwipatheni okanye ubunzima beentloko ze-migraine;
♦ ukuvuvukala ezandleni zakho, ama-ankle, okanye iinyawo;
♦ isifuba sebele; okanye iimpawu zokudakumba-iingxaki zokulala, ubuthathaka, ukuva, ukuguquka kwemizwelo.
♦ ukuphuma kwintsholongwane yomzimba okanye ukuphawula;
♦ I-nasusea (ngokukodwa xa uqale uthabatha eli liyeza), ukuhlanza, ukubhubhisa;
♦ utshintsho kwisisindo okanye ngesidlo;
♦ isifuba sesisu okanye ukuvuvukala;
♦ i-freckles okanye i-darkening yekhanda lobuso, ukwanda kweenwele, ukonakala kweenwele ze-scalp;
♦ intloko; okanye ukutshiza okanye ukukhulelwa kwesisu.
9. Iimpembelelo zePoogestrel Powder ngelixa ukuxiliswa
(1) Iimpembelelo kwiintsana ezisetyayo
Uvavanyo olungenalutho, olungagqitywanga luqhathaniswa nompu we-desogestrel womlomo 75 mcg yedwa kwansuku zonke (n = 42) kwisixhobo sangaphakathi (IUD; n = 40) siqalile i-28 kwiintsuku ze-56 emva kokubeleka. Akukho nantlukwano ebangeni lobude, ubunzima okanye i-biparietal head circumferences zifunyenwe emva kwe-1, 4, kunye ne-7 yonyango. Ukwandiswa kwesifuba sexeshana kwabikwa kwiintsana ze-2 kwaye kwanda ukukhukhuma kwabhalwe kwi-1 intsana kwiqela le-powder deogestrel, xa kuthelekiswa nemiphumo emibi echazwe kwiintsana kwiqela le-IUD. Ukukhula kwezinye iintsana kwaphinda kwalinganiswa kwi-1.5 kunye ne-2.5 iminyaka; akukho ntlukwano ebaluleke kakhulu ekliniki.
I-breastfed (ubungakanani obungachazwanga) intsana iqhutywe ngeenwele ezikhulayo kwiinyanga ezili-4. Unina wayefumene progestin, i-dydrogestrone, ngexesha le-trimester yokuqala yokukhulelwa kwaye yaqala ukuthatha i-désogestrel powder 0.075 mg nsuku zonke njengoko kuqalisa ukukhulelwa kwiinyanga ze-3 emva kokuhamba. Unina wayeka umgubo we-désogestrel emva kweentsuku ze-28 kunye neenwele eziqhawulayo ezinqunywe ziinyanga ezili-11. I-powder de Desogestrel yinto ebangela ukuba kubekho ukunyuka kweenwele eziqhekezayo kule ntsana.
(2) Iimiphumo kwiLactation kunye ne Breastmilk
Ucwaningo olungaqaliyo, olungabonakaliyo luqhathanise ukugqithiswa komzimba we-desogestrel powder 75 mcg yedwa kwansuku zonke (n = 42) kwisixhobo sangaphakathi (n = 40) siqalise i-28 kwiintsuku ze-56 emva kokusuka kwe-contraception. Ngexesha le-7-inyanga yolu vavanyo, umfazi we-1 waphuma ekulingweni ngenxa yokwahluka kwe-lactation xa kuthelekiswa nanye kwiqela le-IUD. Ekupheleni komjikelo wokuqala nowesine, kwakungekho nantlukwano kwinani lobisi oluveliswa phakathi kwe-powder deogestrel kunye namaqela e-IUD. Akukho nantlukwano kwi-triglyceride, iprotheni okanye umthamo we-lactose yobisi yafunyanwa ekupheleni kwe-1, 4, kunye ne-7 yonyango.
Uvavanyo olungazange lufakwe ngokulandelelana lwalulandelayo lwabafazi be-200 banikezwa i-desogestrel yokukhusela ukukhulelwa kwe-75 mcg nsuku zonke kwiinyanga ze-6 eziqala kwiiveki ze-6 emva kokugqithiselwa kwaye zithelekisa kunye nabafazi be-200 abafumana indawo ye-placebos. Akukho mahluko afunyenwe kwimali yobisi okanye ukukhula kwabantwana kunye nophuhliso phakathi kwamaqela amabini.
10. Ubunzima beDoogestrel Ukuthengiswa
(1) Umthombo ongaphezulu kwi-Desogestrel Abaphakeli bePowder
(2) Thenga iPowogestrel Powder ngoku
♦ Khangela i-Desogestrel Powder kwi-AASraw
♦ Khangela Powder Windows XP, kwaye ubhale phantsi iifirmnets zakho.
(3) I-Advantage Of Buy Powder Desogestrel ukusuka kwi-AASraw
tags: ukuthenga i-Desogestrel powder, Desogestrel powder
Yinto Yonke Into Okufuneka Uyiqonde NgoBurtezomib	Ingakanani i-4-DHEA ifumana i-Testosterone?